Alahady faha 3 Karemy B (Jn 2,13-25) 04/02/2018 | FKMP
Alahady faha 3 Karemy B (Jn 2,13-25) 04/02/2018
AZA ATAONAREO TRANO FIVAROTANA NY TRANON’NY RAIKO
Raha dinihantsika ny fihetsika sy ny fiainan’i Jesoa dia niaro mandrakariva ireo olona nifanerasera taminy Izy. Jereo fotsiny ohatra ilay vehivavy tratra nijangajanga namindrany fo sy narovany. Jereo ireo mpanota maro niara-nisakafo taminy nanehoany ny Famindram-pony mandrakariva. Jereo ilay jiolahy niara-nofatsihana taminy sy ireo mpamono Azy. Jereo ilay Izy nitomany an’i Jerosalema.Fa ahoana tokoa ary i Jesoa no tena sarotiny amin’ity Evanjely androany ity manoloana ireo olona nitady vola sy nivarotra tao an-tempoly? Toa tena tsy namindra fo mihitsy Izy fa tena tsy nitsitsy ireo olona ireo, nanakorontana ny latabatra!
Mahasarotiny an’i Jesoa ny fanaovana tsinotsinona ny Tranon’Andriamanitra Rainy. Moa ve tsapantsika ny hasarobidin’izany fanajana ny Tranon’Andriamanitra maha sarotiny an’i Jesoa izany?
– Raha vao hiainga any amin’ny misy antsika isika ka handeha ho ao amin’ny Eglizin’Andriamanitra, moa ve mba fantantsika ny fahasoavana homanin’Andriamanitra ho antsika ao antranony ao? Aona ny fiomanana hataontsika hihaona Aminy? Moa ve maimay tokoa isika ary tena manome lanja izany tokoa? Jereo ange ny fiomanatsika rehefa andeha hamonjy lanonana ireny e? Moa ve mba mihoatra lavitra noho ireny ny fiomanantsika rehefa hihaona amin’ilay Tompontsika?
– Rehefa miditra amin’io Eglizin’Andriamanitra io isika, moa ve tsapantsika tokoa fa mila fanajana io Tranony io? Ahoana ny fihetsika hataontsika rehefa ao? Ny fitenintsika, ny eritreritsika, ny fitafintsika? Toerana tsy manam-paharoa io satria ao no misy ilay otely masina hanolorana ilay Sorona Masina, handraisana sy hihainoana ny Teniny, misy an’i Jesoa ao amin’ny Eokaristia, misy ilay Hazofijaliana Masina namonjeny antsika. Mila mi EZAKA isika manoloana izany.
– Rehefa hiala ao indray isika ka hamonjy ny ankany sy ny fianakaviana ary ny fiainana andavanandro, ka nahatsapa ny lanjan’ny Fihaonanatsika Taminy, ny aim-panahy nomeny antsika, ny Vavaka sy ny fifonana ary ny fiderana nataontsika Taminy, moa ve misy vokany eo amin’ny fiainanatsika izany? Toa tsapako ary henoko tao ny Fitiavany ahy isanandro vaky. Dia havelako ho fahazarana fotsiny ve izany?
Izao Karemy izao no tokony handinihantsika misimisy kokoa izany ary hanaovantsika EZAKA marina tokoa hanajantsika ny Tempoln’Andriamanitra.
Previous Post: Asabotsy 2B Karemy (Lk 15,1-3.11-32) 03/03/2018
Next Post: Talata faha 3 Karemy B ( Mt 18,21-35) 06/03/2018